Wararka - Khadka R&D ee taxanaha wax soo saarka ee Rainpoo
Wararka Shirkadaha Tignoolajiyada roobka
Khadka R&D ee taxanaha wax soo saarka ee Rainpoo
Iyada oo la adeegsanayo hordhaca Sidee dhererka diiradda u saameeya natiijooyinka qaabaynta 3D, waxaad yeelan kartaa faham horudhac ah oo ku saabsan xidhiidhka ka dhexeeya dhererka focal iyo FOV. Laga soo bilaabo dejinta xuduudaha duulimaadka ilaa habka qaabaynta 3D, labadan xuduud ayaa had iyo jeer leh booskooda. Haddaba waa maxay saamaynta ay labadan cabbir ku leeyihiin natiijooyinka qaabaynta 3D? Maqaalkan, waxaan ku soo bandhigi doonaa sida Rainpoo u ogaadey xiriirka habka R&D ee badeecada, iyo sida loo helo dheelitirka u dhexeeya iska hor imaadka dhererka duulimaadka iyo natiijadii qaabka 3D.
1. Laga soo bilaabo D2 ilaa D3
RIY-D2 waa badeecad si gaar ah loogu horumariyay mashaariicda sahanka cadastral. Sidoo kale waa kamarada ugu horeeysa ee aqbaleysa naqshadeynta muraayadaha hoos-u-dhaca iyo gudaha. D2 waxay leedahay saxnaanta qaabaynta sare iyo tayada qaabaynta wanaagsan, taas oo ku haboon qaabaynta muuqaalka oo leh dhul fidsan oo aan aad u sareyn. Si kastaba ha noqotee, hoos u dhac weyn, dhul adag iyo muuqaal muuqaal ah (oo ay ku jiraan khadadka korantada sare, qiiqa qiiqa, saldhigyada saldhigyada iyo dhismayaasha kale ee dhaadheer), badbaadada duulimaadka ee drone-ka ayaa noqon doonta dhibaato weyn.
Hawlgallada dhabta ah, macaamiisha qaarkood ma qorshaynayaan dhererka duulimaadka wanaagsan, taas oo keentay in diyaaradda aan duuliyaha lahayn ay soo laalaabto xadhkaha korantada sare ama ay ku dhufato saldhigga saldhigga; Ama inkasta oo qaar ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay nasiib u yeesheen inay soo maraan meelaha khatarta ah, waxay ogaadeen kaliya in diyaaraduhu ay aad ugu dhow yihiin meelaha khatarta ah marka ay fiiriyaan sawirada hawada. Khatarahaas iyo khatarta qarsoon waxay inta badan keenaan khasaare hantiyeed oo badan oo macaamiisha ah.
Saldhig saldhigga ah ayaa ka muuqda sawirka, waxaad arki kartaa inay aad ugu dhowdahay diyaaradda aan duuliyaha lahayn, oo ay u badan tahay inay ku dhufato Sidaa darteed, macaamiil badan ayaa na soo jeediyay talooyin: Miyaa la samayn karaa kamarad dheer oo dhererkeedu dheer yahay si ay dhererka duulimaadka Drone-ka ka dhigto mid sarreeya oo ka dhigi doonta mid ammaan ah? Iyada oo ku saleysan baahida macaamiisha, oo ku saleysan D2, waxaan soo saarnay nooca dhererka focal dheer oo lagu magacaabo RIY-D3. Marka la barbar dhigo D2, isla qaraarka, D3 waxay kordhin kartaa joogga duulimaadka Drone-ka qiyaastii 60%.
Inta lagu guda jiro R&D ee D3, waxaan had iyo jeer aaminsan nahay in dhererka focalka dheer uu yeelan karo joog sare oo duulimaad ah, tayada qaabaynta wanaagsan iyo saxnaanta sare. Laakiin shaqada dhabta ah ka dib, waxaan ogaanay in aysan ahayn sidii la filayay, marka loo eego D2, qaabka 3D ee ay dhistay D3 ayaa ahaa mid aad u cidhiidhi ah, hufnaanta shaqaduna aad bay u hoosaysay.
Nooca dareemayaasha APS-C
CMOS cabbir 23.5mm×15.6mm
Cabbirka jireed ee pixel 3.9um
Wadarta pixels 120MP
Inta u dhexaysa wakhtiga ugu yar ee gaadhista 1s
Habka muujinta kamarada Soo-gaadhista Isochronic/Isometric
dhererka focal 20mm/35mm ee D235mm/50mm ee D3
Korontada Sahayda lebbiska ah (Awoodda aan duuliyaha lahayn)
awoodda xusuusta 320G
Soo dejin xogta ayaa dhacday ≥70M/s
Heerkulka shaqada -10°C~+40°C
Cusboonaysiinta Firmware Bilaash
Heerka IP IP43
2, Xiriirka ka dhexeeya dhererka focal iyo tayada moodaynta
Xidhiidhka u dhexeeya dhererka focal iyo tayada qaabaynta ma fududa macaamiisha intooda badan inay fahmaan, xitaa qaar badan oo ka mid ah soo-saareyaasha kamaradaha ayaa si qalad ah u aaminsan in leniska dhererka dheer ee dhererka dheer uu waxtar u leeyahay qaabeynta tayada.
Xaaladda dhabta ah ee halkan waa: marka la eego in xuduudaha kale ay isku mid yihiin, wejiga dhismaha, dhererka dhererka dhererka, ayaa ka sii daraya sinnaanta qaabeynta. Waa maxay nooca xiriirka macquulka ah ee halkan ku lug leh?
Maqaalka ugu dambeeya Sidee dhererka diirada u saameeya natiijooyinka qaabaynta 3D waxaynu soo sheegnay:
Marka la eego aragtida ah in xuduudaha kale ay isku mid yihiin, dhererka foorarka ayaa kaliya saameyn doona dhererka duulimaadka. Sida ku cad shaxanka kore, waxaa jira laba lenses focal oo kala duwan, casaanka ayaa tilmaamaya lens focal oo dheer, buluugna wuxuu tilmaamayaa muraayad gaaban oo gaaban. Xagalka ugu badan ee uu sameeyay lens-ka fog ee dheer iyo darbigu waa α, xagasha ugu badan ee uu sameeyay lens-ga gaaban iyo darbigu waa β. Sida cad:
Waa maxay macnaha "xagalkan"? Way weyn tahay xagasha u dhaxaysa cidhifka FOV ee muraayada iyo gidaarka, waxa ka sii badan muraayadda siman marka loo eego gidaarka. Marka la ururinayo macluumaadka ku saabsan dhismaha wejiyada, muraayadaha gaaban ee gaaban waxay ururin karaan macluumaadka derbiga si siman, iyo moodooyinka 3D ee ku salaysan waxay si fiican u muujin karaan qaabka wejiga. Sidaa darteed, muuqaallada wejiyada leh, marka ay gaaban tahay dhererka diiradda ee muraayadda, ayaa ka sii fiicnaanaya macluumaadka wejiga ee la soo ururiyey iyo tayada qaabeynta oo ka sii wanaagsan.
Dhismayaasha leh saqafyada, oo ku hoos jira xaalad isku mid ah xallinta dhulka, dhererka dhererka lens-ka ee dheer, sare u kaca duulimaadka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, dhibco badan oo indho la'aan ah oo ka hooseeya sariiraha, ka dibna tayada qaabeynta ayaa ka sii xumaan doonta. Haddaba dhacdadan, D3 oo leh lens dhererkiisu dheer yahay lama tartami karo D2 oo leh muraayad dhererkeedu gaaban yahay.
3. Iska horimaadka u dhexeeya dhererka duulimaadka ee drone-ka iyo tayada qaabka 3D
Marka loo eego isku xirka macquulka ah ee dhererka focal iyo tayada tusaalaha, haddii dhererka muraayadda lensku uu gaaban yahay oo xagasha FOV ku filan tahay, looma baahna kamarad lens ah oo badan. Muraayadaha xagal ballaadhan oo aad u ballaadhan (lens-kalluun-indhaha) ayaa ururin kara macluumaadka jihooyinka oo dhan. Sida hoos ka muuqata:
Miyayna fiicnayn in la naqshadeeyo dhererka muraayadda muraayadda sida ugu gaaban ee suurtogalka ah?
Ma aha in la sheego dhibaatada qallooca weyn ee ay sababtay dhererka fogaanta aadka u gaaban. Haddii dhererka focal ee lenska ortho ee kamarad oblique ah loogu talagalay inuu noqdo 10mm xogtana lagu ururiyo xallinta 2cm, joogitaanka duulimaadka diyaaradda waa 51 mitir oo keliya.
Sida iska cad, haddii diyaaradda aan duuliyaha lahayni ay ku rakiban tahay kamarad qarsoon oo loogu talagalay habkan si ay shaqooyin u qabato, hubaal waxay noqon doontaa khatar.
PS: In kasta oo muraayada xagal-ballaaran ay xaddidan tahay isticmaalka muuqaallada qaabaynta sawir-qaadista, waxay muhiimad wax ku ool ah u leedahay qaabaynta Lidar. Markii hore, mid ka mid ah shirkadaha caanka ah ee Lidar ayaa nala soo xidhiidhay, iyada oo rajaynaysa inaanu naqshadaynno kamarad xagal ballaadhan oo lenska hawada ah, oo lagu rakibay Lidar, si loo tarjumo walxaha dhulka iyo ururinta texture.
4. Laga soo bilaabo D3 ilaa DG3
R&D ee D3 ayaa naga dhigay inaan ogaano in sawir-qaadista, dhererka xuduntu aanu noqon karin mid keli ah mid dheer ama gaaban. Dhererku wuxuu si dhow ula xiriiraa tayada qaabka, hufnaanta shaqada, iyo dhererka duulimaadka. Markaa muraayadda R&D, su'aasha ugu horreysa ee la tixgelinayo waa: sida loo dejiyo dhererka muraayadaha indhaha?
Inkasta oo xudunta gaaban ay leedahay tayada qaabaynta wanaagsan, laakiin joogga duulimaadku wuu hooseeyaa, ammaan uma aha duulimaadka aan duuliyaha lahayn. Si loo hubiyo badbaadada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, dhererka fooxa waa in la nashqadeeyaa muddo dheer, laakiin dhererka fogaanta waxay saameyn doontaa hufnaanta shaqada iyo tayada qaabeynta. Waxaa jira khilaaf gaar ah oo u dhexeeya dhererka duulimaadka iyo tayada qaabaynta 3D. Waa in aan raadinnaa tanaasul ka dhexeeya is-diiddan.
Markaa kadib D3, iyadoo ku saleysan tixgalinteena dhameystiran ee arrimahan iska soo horjeeda, waxaan sameynay kamarada DG3. DG3 waxa ay xisaabta ku dartaa tayada qaabaynta 3D ee D2 iyo joogga duulimaadka ee D3, halka ay sidoo kale ku darayso habka kulaylka iyo ka saarista boodhka, si ay sidoo kale loogu isticmaali karo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee VTOL. DG3 waa kamarada ugu caansan ee loo yaqaan Rainpoo, sidoo kale waa kamarada ugu isticmaalka badan suuqa.
Cabbirka CCD 23.5mm×15.6mm
Inta u dhexaysa wakhtiga ugu yar ee gaadhista 0.8s
dhererka focal 28mm/40mm
awoodda xusuusta 320/640G
Soo dejin xogta ayaa dhacday ≥80M/s
5. Laga soo bilaabo DG3 ilaa DG3Pros
Taxanaha RIY-Pros kamarada qarsoon waxay gaari kartaa tayada qaabaynta wanaagsan. Haddaba waa maxay nashqadaynta gaarka ah ee ay Pros-ku ku leeyihiin qaabka muraayadda iyo dejinta dhererka fogaanta? Arrintaan, waxaan sii wadi doonaa inaan soo bandhigno naqshadeynta-macquul ka dambeeya cabbirrada Faa'iidooyinka.
Qoraalkii hore wuxuu xusay aragtidan: dhererka fogaanta gaaban ee gaaban, xagasha weyn ee aragtida, macluumaadka wejiga dhismaha ee badan ayaa la soo ururin karaa, iyo tayada tayada qaabeynta.
Marka lagu daro dejinta dhererka fog ee macquulka ah, dabcan, waxaan sidoo kale isticmaali karnaa hab kale si aan u wanaajino saameynta qaabeynta: si toos ah u kordhiya xagasha muraayadaha indhaha, kuwaas oo sidoo kale ururin kara macluumaad badan oo facade ah.
Laakiin dhab ahaantii, inkasta oo dejinta xagal weyn oo oblique ah ay hagaajin karto tayada qaabaynta, waxaa sidoo kale jira laba saameynood:
1: Hufnaanta shaqada ayaa yarayn doonta. Kordhinta xagasha oblique , balaadhinta dibadda ee wadada duulimaadka ayaa sidoo kale kordhin doonta wax badan. Marka xagal daaqsinka ah oo dhaafo 45 °, hufnaanta duulimaadku si xoog leh ayuu hoos ugu dhici doonaa.
Tusaale ahaan, kamaradda hawada sare ee Leica RCD30, waa xagal qallafsan oo kaliya 30 °, mid ka mid ah sababaha naqshadeynta waa in la kordhiyo waxtarka shaqada.
2:Hadii xagal daaqsinka ahi aad u wayntahay, ilayska qorraxdu si sahal ah ayay kamarada u galaysaa,taasi oo dhalinaysa dhalaal (gaar ahaan subaxdii iyo galabtii oo ah maalin cidhiidhi ah). Kaamirada oblique ee roobka da'aya ayaa ah tii ugu horaysay ee qabata nashqada muraayada gudaha. Naqshadani waxay u dhigantaa in daboolka lagu daro muraayadaha si looga hortago inay saameyn ku yeelato iftiinka qorraxdu.
Gaar ahaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee yar yar, guud ahaan, hab-dhaqankooda duulimaadku aad buu u liitaa. Ka dib markii lens-ku xagal daa'imka ah iyo hab-dhaqanka diyaaradda aan duuliyaha lahayn la dul-saaran yahay, iftiinka qalooca ayaa si fudud u geli kara kamaradda, isagoo sii xoojinaya dhibaatada iftiimaya.
Marka loo eego waayo-aragnimada, si loo hubiyo tayada qaabka, shay kasta oo meel bannaan ah, waxa ugu wanaagsan in la daboolo macluumaadka texture ee shanta kooxood ee lenses inta lagu jiro duulimaadka.
Tani way fududahay in la fahmo. Tusaale ahaan, haddii aan rabno inaan dhisno qaabka 3D ee dhismo qadiimi ah, tayada qaabaynta ee duulimaadka goobada waa inay aad uga fiican tahay tayada qaadashada dhowr sawir oo afar dhinac ah.
Sawirro badan oo la daboolay, ayaa sii badanaya macluumaadka meelaha iyo qoraalka ay ka kooban tahay, waxayna sii fiicnaan doontaa tayada qaabaynta. Tani waa macnaha isku dhafka dariiqa duulimaadka ee sawir qaadista.
Heerka isku dhafka ayaa ah mid ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee go'aamiya tayada qaabka 3D. Goobta guud ee sawir-qaadista, heerka is-ku-kordhisku wuxuu u badan yahay 80% iyo 70% dhinac (xogta dhabta ah waa mid aan badnayn).
Dhab ahaantii, waxaa hubaal ah in ay aad u fiican tahay in la isku mid ah oo isku mid ah oo isku dhafan oo dhinac ah, laakiin aadka u sarreeya ee isku-dhafka ah ayaa si weyn u dhimi doona waxtarka duulimaadka (gaar ahaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn), sidaas darteed ku salaysan waxtarka, isku-dhafka guud ee dhinacyada ayaa ka hooseeya kan is dulfuulan.
Talooyin: Iyadoo la tixgalinayo hufnaanta shaqada, shahaadada is dulsaarku maaha mid aad u sareysa intii suurtogal ah. Ka dib marka la dhaafo "heerka", hagaajinta heerka isugeynta ayaa saameyn xaddidan ku leh qaabka 3D. Marka loo eego jawaab-celintayada tijaabada ah, mararka qaarkood kordhinta isku-dhafka ayaa dhab ahaantii hoos u dhigi doonta tayada moodeelka. Tusaale ahaan, goobta qaabaynta xallinta ee 3 ~ 5cm, tayada qaabaynta ee heerka hoose ee is dulsaaran mararka qaarkood way ka fiican tahay heerka sare ee is dulsaaran.
8. Farqiga u dhexeeya isku-dhafka aragtida iyo isku-dhafka dhabta ah
Duulimaadka ka hor, waxa aanu dejinay 80% udub dhexaadka iyo 70% dhinaca isku dhafka ah, taas oo ah kaliya isku dhafka aragtida. Duulimaadka, diyaarada aan duuliyaha lahayn ayaa saameyn ku yeelan doonta socodka hawada.iyo isbeddelka hab-dhaqanka ayaa keeni doona isku-xidhka dhabta ah inuu ka yaraado isku-dhafka aragtida.
Guud ahaan, haddii ay tahay rotor multi-rotor ama mid go'an drone, liidata habdhaqanka duulimaadka, ka sii daraya tayada model 3D. Sababtoo ah kuwa yar yar ee rotor-ka badan ama kuwa aan duuliyaha lahayn ee aan duuliyaha lahayn ayaa miisaankoodu ka fudud yahay oo ka yar cabbir ahaan, waxay u nugul yihiin faragelinta hawada dibadda. Dabeecaddooda duulimaadku guud ahaan uma fiicna sida kuwa dhexdhexaadka ah / weyn ee rotor-ka badan ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee go'an, taasoo keentay in shahaadada dhabta ah ee isku dhafka ah ee dhulka qaarkood aysan ku filneyn, taas oo ugu dambeyntii saameyneysa tayada qaabeynta.
9.Dhibaatooyinka ku jira qaabaynta 3D ee dhismayaasha dhaadheer
Marka dhererka dhismuhu kordho, dhibka qaabaynta 3D way kordhi doontaa. Mid waa in daaraha dhaadheer uu kordhinayo khatarta duulista diyaaradda, midda labaadna waa in marka dhererka dhismaha uu kordho, isku-dhafka qeybaha dhaadheer uu aad hoos ugu dhaco, taasoo keentay in tayada 3D-ga ay xumaato.
1 Saamaynta Korodhka Isku-xidhka 3D Qaabaynta Tayada Dhismaha Sare
Dhibaatada kor ku xusan, macaamiil badan oo khibrad leh ayaa xal u helay: kordhinta heerka isku-dhafka. Runtii, korodhka heerka isugeynta, saamaynta moodeelka ayaa si weyn loo horumarin doonaa. Waxa soo socda waa isbarbardhigga tijaabadii aanu samaynay:
Marka loo eego isbarbardhigga kor ku xusan, waxaan ogaan doonaa in: kororka heerka isugeynta uu saameyn yar ku leeyahay qaabeynta tayada dhismooyinka hoose; laakiin waxa uu saamayn weyn ku leeyahay qaabaynta tayada dhismayaasha dhaadheer.
Si kastaba ha noqotee, marka heerka isugeynta uu kordho, tirada sawirada anteenada ayaa kordhin doonta, iyo waqtiga habaynta xogta ayaa sidoo kale kordhin doonta.
2 Saamaynta dhererka focal on 3D Qaabaynta Tayada Dhismaha Sare
Waxaanu nuxurka hore ku soo gunaanaday sidan:Waayo dhismaha wejiga 3D muuqaalada qaabaynta, dheeraanta dhererka focal, ayaa ka sii xumaanaysa qaabaynta tayada. Si kastaba ha noqotee, qaabaynta 3D ee meelaha sare, dhererka fogaanta ayaa loo baahan yahay si loo hubiyo tayada qaabaynta. Sida hoos ka muuqata:
Marka la eego shuruudaha isku midka ah ee xallinta iyo heerka isku dhafan, muraayadda dhererka dheer ee muraayadda waxay hubin kartaa heerka dhabta ah ee saqafka iyo dhererka duulimaadka oo ku filan si loo gaaro tayada qaabeynta ee dhismayaasha dhaadheer.
Tusaale ahaan, marka DG4pros camera oblique loo isticmaalo in lagu sameeyo qaabaynta 3D ee dhismayaasha dhaadheer, ma aha oo kaliya in ay ku guulaysato tayada qaabaynta wanaagsan, laakiin saxnaanta ayaa weli gaadhi karta 1: 500 shuruudaha sahanka cadastral, taas oo ah faa'iidada focal dheer muraayadaha dhererka.
Kiis: Kiis guul ah oo sawir-qaadis ah
10, RIY-Pros taxane ah kamaradaha qarsoon
Si loo gaaro tayada qaabaynta wanaagsan, iyada oo la raacayo go'aanka isku midka ah, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo isku-dhafka ku filan iyo goobaha waaweyn ee aragtida. Gobollada leh farqiga dhererka dhuleed ee waaweyn ama dhismayaasha dhaadheer, dhererka foorarka ee muraayadda ayaa sidoo kale ah. arrin muhiim ah oo saameeya tayada moodelaynta. Iyadoo lagu salaynayo mabaadi'da sare, kamaradaha taxanaha ee Rainpoo RIY-Pros waxay sameeyeen saddexdan hagaajin ee muraayada:
1 Beddel qaabka muraayaddases
Kaamirooyinka taxanaha ah ee faa'iido doonka ah, dareenka ugu dareenku waa in qaabkiisu uu isu beddelo wareega ilaa labajibbaaran. Sababta ugu toosan ee isbeddelkan ayaa ah in qaabka lenses-ka uu isbeddelay.
Faa'iidada qaabkani waa in cabbirka kamaradda loo qaabayn karo si uu u yaraado miisaankana uu noqon karo mid fudud. Si kastaba ha ahaatee, qaabkani waxa uu dhalin doonaa in heerka isku dhafka ah ee muraayadaha bidix iyo midig ay ka hooseeyaan kuwa hore, dhexe, iyo aragtida danbe: taas oo ah, aagga hadh A ayaa ka yar aagga hooska B.
Sidii aan horay u soo sheegnay, si loo hagaajiyo hufnaanta duulimaadka, isugeynta dhinacyadu guud ahaan way ka yar yihiin isku-duubka ciwaanka, "qaabaynta agagaarka" waxay sii yaraynaysaa isku-dhafka dhinac-dhaafka ah, taas oo ah sababta qaabka 3D ee dambe uu ka liito ciwaanka 3D. model.
Haddaba taxanaha RIY-Pros, Rainpoo waxay u beddeshay qaabka muraayadaha: nashqada barbar socota. Sida hoos ka muuqata:
Qaabayntani waxay allabari doontaa qayb ka mid ah qaabka iyo miisaanka, laakiin faa'iidada ayaa ah in ay hubin karto in ku filan oo dhinac ah oo isku dhafan oo la gaaro tayada qaabeynta ka wanaagsan. Qorshaynta dhabta ah ee duulimaadka, RIY-Pros waxay xitaa yarayn kartaa isku dhafka dhinac-geeska ah si loo horumariyo hufnaanta duulimaadka.
2 Hagaajin xagasha oblique muraayadses
Faa'iidada "qaabaynta barbar-dhigga" waa in aysan hubin kaliya isku-dhafka ku filan, laakiin sidoo kale waxay kordhisaa dhinaca FOV waxayna ururin kartaa macluumaad badan oo muuqaal ah oo dhismo ah.
Sidan oo kale, waxaan sidoo kale kordhinay dhererka foorarka ee muraayadaha indhaha si ay cidhifkeeda hoose ula jaanqaado cidhifka hoose ee qaabaynta hore ee "qaabaynta agagaarka", taas oo sii kordhinaysa aragtida dhinaca ee xagasha, sida ku cad shaxanka soo socda:
Faa'iidada qaabkani waa in inkasta oo xagasha muraayadaha indhaha la beddelay, haddana ma saameynayso waxtarka duulimaadka. Ka dib markii FOV ee lenses-yada si weyn loo wanaajiyo, xog badan oo macluumaad facade ah ayaa la ururin karaa, tayada qaabaynta dabcan waa la hagaajiyay.
Tijaabooyinka isbarbardhigga ayaa sidoo kale muujinaya, marka la barbar dhigo qaabka dhaqameed ee muraayadaha, qaabeynta taxanaha faa'iidooyinka ayaa runtii hagaajin kara tayada dhinac ee moodooyinka 3D.
Bidixdu waa qaabka 3D ee ay dhistay kamarada qaabeynta dhaqameed, iyo midigta waa qaabka 3D ee ay dhistay kamarada Pros.
3 Kordhi dhererka focal ee muraayadaha indhaha
RIY-Pros muraayadaha muraayadaha muraayadaha indhaha ayaa laga beddelayaa "qaabaynta hareeraha" ee dhaqameed ee "qaabaynta barbar-dhigga", iyo saamiga xallinta u dhow ee xallinta fog ee sawirada laga qaaday muraayadaha indhaha ayaa sidoo kale kordhin doona.
Si loo hubiyo in saamiga uusan dhaafin qiimaha muhiimka ah, Faa'iidooyinka muraayadaha indho-indheynta waxay kordhiyeen 5% ~ 8% sidii hore.
Magaca Faa'iidooyinka Riy-DG3
dhererka focal 28mm/43mm
Hore:Soo bandhigida wada shaqaynta
Xiga:D2+ DG3PROS| Mashruuca Wadajirka ah ee Iskaashatada Qaybaha Badan ee Guryaha